Fujitsu Draịvụ Iweghachite Tutorial
Olee otú iji weghachite Lost Data si Fujitsu Draịvụ
Ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka ma ama dị ka Sony na Toshiba, Fujitsu bụkwa ihe dị na laptọọpụ na draịvụ ike na-emeputa niile gburugburu ụwa. Otú ọ dị, Fujitsu laptọọpụ na draịvụ ike ọrụ nwere ike na-enwe data ọnwụ nke. E were gị bara uru foto ma ọ bụ vidiyo e mmadụ na mberede ehichapụ ma ọ bụ formatted si gị Fujitsu ike mbanye, ị ga-ukwuu enwe nkụda mmụọ? Ọ bụrụ na ị na-arịọ maka Fujitsu ike mbanye mgbake software, ebe a bụ nri ebe.
The Best Fujitsu Draịvụ Iweghachite Software
Aga m gosi gị ụfọdụ Nkweta banyere data ọnwụ mbụ. Nọmalị furu efu faịlụ ndị ka na gị Fujitsu ike mbanye, bụ ezie na ị na-apụghị ịhụ ma ọ bụ nweta ha ọzọ. Ha ga-omume ga-efu na-adịgide adịgide overwritten site ọhụrụ faịlụ. Ya mere, na-agbake data si Fujitsu ike mbanye, i kwesịrị apụ kwụsị iji gị Fujitsu ike mbanye. Mgbe ahụ ị pụrụ abịa Internet anya n'ihi na a Fujitsu ike mbanye data mgbake mmekọ.
N'agbanyeghị ihe mere ka data ọnwụ, Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ otu n'ime gị mma nhọrọ naghachi data si Fujitsu ike mbanye. Ị nwere ike effortlessly weghachite a dịgasị iche iche nke na-ehichapụ, formatted ma ọ bụ ọbụna emerụ data dị ka foto, akwụkwọ faịlụ na videos si gị Fujitsu ike mbanye. The ngwá ọrụ oke itunanya awade ma Windows na Mac nsụgharị oke.
Iji ego ma gị furu efu faịlụ nwere ike natara ma ọ bụ, ị nwere ike ugbu download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery ike iṅomi gị Fujitsu ike mbanye. Dabere na scanning N'ihi ya, i nwere ike ikpebi ịzụta zuru version mgbake ma ọ bụ.
Igosi Fujitsu Draịvụ Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1 Họrọ Iweghachite ọnọdụ naghachi Data si Fujitsu Draịvụ
Ị na-aga họrọ a mgbake mode na-amalite mgbake mgbe launching usoro ihe omume. Site oyiyi n'okpuru, ị pụrụ ịhụ na ị na-nyere na 3 mgbake ụdịdị. Iji naputa furu efu data, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode mbụ.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Fujitsu Draịvụ ịchọpụta na Lost Files
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ mbanye akwụkwọ ozi gị Fujitsu ike mbanye na-amalite ịgụ isiokwu, nke ga-achọpụtara na depụtara na omume interface.
Cheta na: Gbaa mbọ hụ na gị Fujitsu ike mbanye nwere ike ghọtara dị ka a ike mbanye na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 weghachite Data si Fujitsu Draịvụ
Gị furu efu data ga-egosipụta na edemede dị ka "Graphic", "Video", "Document", wdg mgbe iṅomi. Ị nwere ike ịlele ma gị furu efu faịlụ nwere ike natara ma ọ bụ si mbụ faịlụ aha. Ịnwere ike ihuchalu hụrụ oyiyi kwa.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha gị na kọmputa.
> Resource> Draịvụ> Fujitsu Draịvụ Iweghachite Tutorial - Olee otú iji weghachi furu efu faịlụ site na Fujitsu Ha